« Maillot de bain » lena, mahatonga aretin’ny fivaviana
Mety hitarika olana amin’ny taovam-pananahana ny fanaovana « maillot de bain » mando ela loatra. Tafiditra ao anatin’izany ny “mycose” sy ny fivaivain’ny hoditra sns. Ho an’ireo mikasa ny hiala sasatra any amorontsiraka, tandremo ny manao “maillot de bain” lena maharitra !
Olana amin’ny hoditra
Mety hitaraika olana eo anivon’ny hoditra ny fanaovana “maillot de bain” mando ela loatra. Ankoatra io olana io dia mety hahatonga “mycose” ihany koa ny akanjo fitondra milomano rehefa lena. Mora mivoatra ao anatin’ny hamandoana sy ny haizina mantsy ny bakteria, ka mora andairan’izany ny vehivavy, ireo olona ao anaty fitsaboan-tena, ireo diabetika ary ireo olona manana hery fiarovana ambany.
Mampiditra singa simika
Mitroka ireo akora simika hita ao anaty rano ny “maillot de bain”. Mipetaka amin’ny taovam-pananahana anefa ny akanjo fitondra milomano, hany ka manimba ny ati-fivaviana sy ny fantson’ny tatavia ireo singa ireo. Ankoatra ny hidihidy dia mety hisy tsiranoka miloko hafahafa na mamofona ihany koa mivoaka.
· Soloina avy hatrany ny “maillot de bain”, raha vao miala avy ao anaty rano.
· Mandro mihitsy avy eo.
· Misolo atin’akanjo madio sy vaovao.
Raha toa ka sendra voan’ny “mycose” , na mangidihidy ny fivaviana any am-panaovana vakansy, dia afaka mamonjy, mandrapankanesana eny amin’ny dokotera, ny “Soin lavant doux Saforelle”. Manomboka amin’ny 17.000 Ariary ny 100 mililitatra, eny amin’ny tranom-barotra lehibe. Azo araraotina ampiasaina ihany koa ny diloilo kôkô, izay betsaka any amoron-tsiraka, ka safidiana tsara ireo tsy mifangaro. Ahosotra fotsiny amin’ny moron’ny ati-fivaviana sy ny manodidina azy, isaky ny avy misasa.